မြစ်ဆုံ: ကိုယ်.ဘဝ ကို ကိုယ်တည်ဆောက်နေတာပါ
ကိုယ်.ဘဝ ကို ကိုယ်တည်ဆောက်နေတာပါ
မိသားစုနဲ.သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနားနားနေနေနေဖို.စိတ်ကူးထားတဲ.အကြောင်းပေါ.။ပိုက်ဆံကတော. အရင်ကလို ဝင်တော.မှာမဟုတ်မှန်းသိပေမယ်. အသက်ကကြီးလာတော. နားချင်ပြီလို.လည်း သူကဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်စုထား ဆောင်းထားတာလေးတွေနဲ. အဆင်ပြေမှာပါလို.လည်း အလုပ်ရှင် ကို လက်သမားဆရာကြီးက ပြောပါတယ်။
သည်စကားကို ကြားရတော. ကန်ထရိုက်တာကြီး အတော်.ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်တော.သူ.လုပ်ငန်းမှာသည်လက်သမားဆရာကြီးက အခရာဘဲ။အင်မတန် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ. လက်သမား ပါ။လက်ရာလည်း အင်မတန်ကောင်းတဲ.သူဆိုတော. နှမြောလှပေါ.။ အေးလေ--- ဒါပေမယ်. သူလည်း အသက်ကြီးပြီဆိုတော. နားချင်မှာပေါ.။ သူ.ဘက်က ကြည်.ရင်တရားပါတယ်လို. ကန်ထရိုက်တာကြီးက တွေးပါတယ်။ ဒါနဲ. အနားမယူခင်မှာ အိမ်တစ်လုံးတော.မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆောက်ပေးပါဦး ဆရာကြီးရယ်၊ ကျနော်.ကို ကူညီတဲ.အနေနဲ.ပါလို. ကန်ထရိုက်တာကြီးက လက်သမားဆရာကြီးကို တောင်းတောင်းပန်ပန် ပြောလာတော.တာနဲ. လက်သမားဆရာကြီးကလည်း ခေါင်းညိတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲ.-- အိမ်ကိုလည်း စဆောက်ရော လက်သမားဆရာကြီးရဲ. စိတ်နှလုံးလား အလုပ်ထဲမှာ မရှိဘူးဆိုတာ တော်တော်.ကို သိသာနေပါတယ်။အင်မတန်သပ်ရပ်တဲ. လက်သမားဆရာကြီးလို. နာမည်ကြီးလှပေမယ်. သည်အိမ်ကိုကျတော.ဖြစ်ကတတ်ဆန်း၊ပြီးစလွယ်ပဲဆော်ထည်.လိုက်တယ်။သုံးထားတဲ.သစ်ဝါးတွေ၊အခြားပစ္စည်းတွေကလည်းခပ်ညံ့ညံ့။ အင်မတန်လက်ရာကောင်းလှပါတယ်၊သပ်ရပ်လှပါတယ်ဆိုတဲ.နာမည်တစ်လုံးကိုအလုပ်ကနားတော.မယ်ကြံတော.မှ အဆုံးခံရတော.မယ်.လက်ရာ ဖြစ်နေပါရောလား။
အိမ်လည်း အပြီးသတ်သွားတဲ.အခါ ကန်ထရိုက်တာကြီးက အိမ်ကို လာပြီးကြည်.တယ်။ ပြီးတော. အိမ်တံခါးသော.နှင်.တကွ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက် စာတမ်းတွေကို လက်သမားဆရာကြီး လက်ထဲ အပ်လိုက်ပြီး အခုလို ပြောလိုက်ပါတယ်။
" သည်အိမ်က ဆရာကြီးအတွက် အိပ်ပါဗျာ၊ ဆရာကြီး အနားယူတဲ.အခါ နားနားနေနေ နေနိုင်အောင် ကျနော် ကျေးဇူးပြုတာပါ " တဲ.။
ဟာ-- တကယ်လို. သည်အိမ်ဟာ သူ.အတွက်ဆိုတာမှန်း စောစောစီးစီးကတည်းက ကြိုသိခဲ.ရင်ဘယ်-- သည်လို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ဆောက်ခဲ.မိမှာတုန်း။ သေသေချာချာ ကျကျနန အပျံစားဖြစ်အောင် ဆောက်လိုက် မိမှာပေါ.။
ကျနော်တို.တွေကလည်း အဲ.ဒီလက်သမားဆရာကြီးလိုပဲ မဟုတ်ပါလား။ စဉ်းစားကြည.်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို.ဘဝတွေကို ကျနော်တို. ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်နေကြ ပါတယ်။ တစ်နေ.တစ်ခါ ဆောက်နေတာပါ။ အဲ.သလို ဆောက်နေတုန်းမှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာထက် အများကြီး လျှော.ပြီး ဖြစ်ကတတ်ဆန်း၊ပေါ.တီးပေါ.ဆဆောက်မိသွားတာကလည်းခဏခဏပါ။ သည်လိုနဲ.ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ.အိမ်ထဲမှာကိုယ်နေရတော.မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ.အခါမှာတော.ကျနော်တို.တွေလည်းလက်သမားဆရာကြီးလိုပဲ ကြက်သေသေမိရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်။ အဲ.ဒီအခါကျမှ ငါ.နှယ်.နော် -- အစကသာ သည်လိုမှန်းသိရင် သည်လိုမလုပ်မိပါဘူးလို. ကြိတ်ပြီး ရေရွတ် မိတာကလည်း များလှပြီ။
တကယ်တော. ကျနော်တို.လူသားတွေအားလုံးဟာ လက်သမားတွေပါဘဲ။ နေစဉ် သံချောင်းလေးတွေ ရိုက်လိုက် ၊ ရွေပေါ်လေးထိုးလိုက် ကော်ပတ်လေးစားလိုက်၊ နံရံလေး ထောင်လိုက်နဲ. ဘဝကို တည်ဆောက်နေကြတဲ. လက်သမားတွေပါ။
ဒါကြောင်. ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက်အသေးအမွှားလေး အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မမေ.သင်.တဲ.အချက်ကတော. ကိုယ်လုပ်သမျှဟာ ကိုယ်နေမယ်. အိမ်အတွက် သံလေးတစ်ချောင်း နှက်သွင်းလိုက်တာ၊ ရွေပေါ်လေး ထိုးလိုက်တာ၊ ကော်ပတ်လေးနဲ. ပွတ်လိုက်တာ၊ တိုင်လေး တစ်ချောင်း ထူလိုက်တာ၊အရောင်တင်ဆီလေးပွတ်လိုက်တာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပါဘဲ။အားလုံးစဉ်းစားနိုင်ကြမယ်ထင်တယ်။
အတ္တကျော်(နေပျော်တဲ.ဘဝ ကြည်မြတဲ.ဘဝင် ရွှင်လန်းတဲ.စိတ်)
အရမ်းကောင်းလွန်းလို. ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ ခင်ဗျာ။
Posted by မောင်မောင် at 13:01